Mid ka mid ah la haystayaashii Faransiiska ahaa oo dawladda Soomaaliya u gacan galay. [Akhris …] – Radio Daljir
Agoosto 26, 2009 12:00 b 0
Muqdisho, Aug 26- Mid ka mid ah la haystayaashii u dhashay dalka Faraniiska ee muddada ku afduubnaa magaalada Muqdisho ayaa dawladda KMG ah ee Soomaaliya isku dhiibay kadib markii uu ka fakaday afduubayaashii gacanta ku hayey.
Ninkaan oo saakay waabarigii lagu arkay aggagaarka madaxtooyada villa Soomaaliya, ayaa si farsamaysan uga baxday kooxdii uu u afduubnaa oo gacanta ku haysatay muddo dhan 43 maalmood.
Waraysi uu siiyey idaacadda VOA-da laanteeda afka Soomaaliga, ayuu ku sheegay fakashadiisa in ay sahashay kadib markii ay hurdoodeen ilaaladii waar-diyaha ka haysay oo uu tiradooda ku sheegay illaa 8 nin.
Waxaa uu sheegay muddo saacado ah in uu dhax cararayey magaalada Muqdisho illaa uu ka soo gaaray goob ammaan ah oo ah meelaha ay dawladdu gacanta ku hayso, wuxuuna intaasi ku daray hadda xaaladdiisu in ay yahay mid wanaagsan, muddadii uu afduubnaana si wanaagsan loola dhaqmay isagoo sheegay in ay gacanta ku hayeen urur Xisbul-Islaam.
Subaxnimadii hore ee saakay, waxaa soo baxayey warar is khilaafsan oo sheegaya in labadii la hayste ee Faransiiska ahaa ay wada baxsadeen, hase yeesheen shir jaar?id uu uu qabtay wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle, ayuu ku sheegay hal nin oo kaliya in uu gacan tooda soo galay wuxuuna ka qaabsaday in uu faah-faahin dheeraad ah ka bixiyo dawladdu wixii ay kala socotay soo baxsashadaasi.
Waxaa jira warar timaamayaa in ay jireen lacag madax furasho ah oo la siiyey ilaaladii ku meernayd ninka Faransiiska ah taasina ay suurto galisay fakashadiisa, laakiin ma jirto cid xaqiijin karta arrintaas.
Bartamihii bishii la soo dhaafay ee July ayey ahayd markii la afduubtay ninkaan iyo nin kale oo isna u dhashay dalka Faransiis, kuwaasi oo marti u ahaa dawladda KMG ah ee Soomaaliya, waxaana ay ahaayeen khuburo xagga milatariga ah oo caawinayey ciidanka dawladda, waxaana laga afduubtay Hotel Saxafi ee magaalada Muqdisho.
Fakashada ninkaan waxay muujinaysaa sawirro kala duwan oo mid yahay dawladda oo ka soo kabata ceebtii ku saabsanayd martidii lagala dhax-baxay, oo ahayd arrin in badan oo bulshada caalamka ah tustay fakar ah dawladdu cidna in aysan marti galin karin, iyo dhanka kale oo ay muujinayso ururkii haystay ee Xisbul-Islaam in uusan awood ahaan uusan joogin halkii loo malaynayey.